The Ab Presents Nepal » पशुपतिनाथले सबैको मनोकाक्षा पुरा गरुन : २०७६ श्रावण १९ देखी २५ सम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस !
पशुपतिनाथले सबैको मनोकाक्षा पुरा गरुन : २०७६ श्रावण १९ देखी २५ सम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस !
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ : साताको सुरुमा शुभचिन्तकहरुको साथ सहयोगमा बिशिष्ट कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । देशप्रदेशको यात्राको योग रहेकोछ । तपाई द्वारा सम्पादित कार्यमा त्रुटि देखाउनेहरु बाटभने बिशेष साबधानी अपनाउनु होला । रोकिएर रहेको लगानि उठाउन बिशेष समय रहेकोछ ।
ब्यपार ब्यवसायमा लगानि बढाउदा उत्तम रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा भने सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । बिहिवार पश्चात भने नजिकका आफन्तजनहरुबाट तपाईका कार्यको भण्डाफोर हुन सक्नेछ । साथै स्वास्थमा समेत सामान्य समस्या देखा पर्नेछ अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । भोज भतेर जन्यकार्यमा सहभागीताको योग रहनेछ । यो साता नयाँ लगानि तथा अरुको बिश्वासमा नपर्नु होला’ ।
बृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो : गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुनाले कार्य परीर्वतनको सम्भाबना रहनेछ । पठनपाठनमा समय मध्यम रहनेछ । बिशिष्ट ब्यत्तित्वहरुको सहयोगमा आम्दानिका श्रोत मजबुत बनाउन सहयोग मिल्नेछ । सन्तानको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहने समय रहेकोछ । प्रतिश्पर्दा जन्यकार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहने समय रहेकोछ । मनोरञ्जनपूर्ण यात्राको योग बन्नेछ ।
मित्रजनहरुको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । बिहिवार पश्चात भने पारीवारिक सम्बन्धमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । साजेदारी कार्यमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा सामान्य घाटाको सम्भाबना रहेकोले सजग रहनु होला । यो साता ब्यापार ब्यवसायमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा उत्तम रहनेछ ।
मिथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह : भुमि तथा वाहान खरिद बिक्रीको योग रहनेछ । पारीवारिक झोरझमेलाको सामना गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य ढिलाईको योग रहनेछ । मानसम्मानमा आचँ आउन सक्ने खालका कार्यहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । नयाँकार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । आम्दानीका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । बिहिवार पश्चात भने तपाईको कार्यमा त्रुटि देखाउने हरुको बृद्यिहुनेछ । अरुको बिश्वासमा छोडिएका कार्यमा तपाईलाई अपजसको सामना गर्नुपर्ने समय रहेकाछ । परीवारका सदस्यहरु टाढाँ भएको महसुस हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यमा अग्रसर नरहनुनै उत्तम रहनेछ । यो साता अरुको बिश्वासमा स्थीर क्षेत्रमा लगानि नगर्नुनै उत्तम रहनेछ ।
कर्कट राशि – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो : मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा जटीलकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । अधिक आत्म बिश्वासका कारण दाजुभाईहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । धार्मिक क्षेत्रको यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । मान्यजनहरुको मार्ग अवलम्वन नर्गनाले कार्य क्षेत्रमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । सवारी साधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ ।
सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीताको अवसर प्राप्त रहनेछ । साताको अन्त्यतिर रचनात्मक कार्यका क्षेत्रबाट सबैको मन जित्न सफल रहिनेछ । आय आर्जनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । साजेदारी कार्यमा सम्लग्न रहनाले दिर्घकालिन आम्दानिका श्रोत फेला पर्नेछन । योसाता मनमा कुनैपनि हालतमा घमण्ड उत्पन्न हुन नदिनु होला ।
सिंह राशि – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे : स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम रहनेछ । वाणिका कारण आफन्तजनहरु सगँ सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्ने समय रहेकोछ । कला कौशलका क्षेत्रबाट मनग्य आम्दानि लिन सकिनेछ । नयाँ कार्यहरु प्रारम्भ गर्न बिशेष समय रहेकोछ ।
मित्रजनहरुको अधिक सामीप्यता त्यति उत्तम रहनेछैन । यात्रामा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्रतिक्षीतकार्यको प्रतिफल उत्तम हासिल रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । योसाता खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुनाले बिशेष सजग रहनु होला साथै मित्रजनहरु सगँ सम्पुर्ण मनपेट नखोल्नु होला ।
कन्या राशि – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो : आफनो प्रभुत्व देखाउने उत्तम समय रहेकोछ । कार्यक्षेत्रबाट सबैको मन जित्न सफल रहिनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा जिवन साथीको अग्रसरता उत्तम रहनेछ । प्रतिष्ठीत कार्यहरु सम्पादित रहनाले मान सम्मान प्राप्त रहनेछ । वाणीका कारण आफन्त जनहरु लाई मुग्धगर्न सकिनेछ । संचित रकम खर्चहुनाले सामान्य तनाबको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । भोजभतेरमा सम्लग्न रहने अवसर प्राप्त रहनेछ ।
मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । नयाँ योजनाका साथ कार्य प्रारम्भगरेका खण्डमा दिर्घकालिन आम्दानिको श्रोत बन्नेछ । बल तथा पराक्रमका क्षेत्रबाट ढिलै भएतापनि अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । यो साता गैर ब्यत्तित्वहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।
तुला राशि – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते : साताको प्रारम्भमा सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । देशबिदेशको यात्राका निम्ती समय मध्यम रहनेछ । प्रतिपक्षीहरु सवल रहनाले कार्यसम्पादनमा सजग रहनु होला । कारणबश समस्या उत्पन्न हुनाले कार्य थालनीको योजना गोप्य राख्नु उत्तम रहनेछ ।
प्राकृतिक क्षेत्रमा मन रम्ने समय रहेकोछ । मगंलबार पश्चात नयाँ कार्यको थालनीले आम्दानिका श्रोतहरु सुदृण तुल्याउनेछन ।शारीरिक आलस्यता ताथ मानसिक चन्चलतालाई बशमा राखि गरीएका कार्यले मान सम्मान दिलाउनेछ । बिहिबार पश्चात भने खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । योसाता मंगलबार तथा बुधबार बाहेक अन्य दिन आर्थिक कारोबारमा बच्नु होला ।
बृश्चिक राशि – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु : साताको प्रारम्भमा मान्यजनहरुको सहयोगमा आम्दानिका श्रोतहरु सुदृण तुल्याउन सकिनेछ । आफुभन्दा सानासगँ समय ब्यतित गर्दा मनोरञ्जनमुलक रहनेछन । कला कौशलका माध्यम द्वारा मान्यजनहरुको मन जित्न सफल रहिनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । बुधबार पश्चात भने गरीरहेका कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहनेछ ।
नजिकका मित्रजनहरु सगँ मनमुटाबको योग रहेकोले बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । साथै बुधबार तथा बिहिबार आर्थिक कारोबारमा साबधानि अपनाउनु होला । बिहिबार पश्चात आफन्त जनहरुको सहयोगमा पुर्व त्रुटिका कार्यहरु समाधान गर्ने उत्तम समय रहेकोछ साथै सभासम्मेलन जन्यकार्यमा समेत सहभागीताको योग बन्नेछ ।
धनु राशि – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे : तपाई द्वारा सम्पादित कार्यको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । कार्य क्षेत्रको लगनसिलताको कदर समेत हुने दिन रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथसहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ । आम्दानिका श्रोतहरु प्रयाप्त प्राप्तरहनेछन । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा खर्चिएका समय उत्तम रहनेछ ।
नयाँ योजनाका साथमा गरीएका कार्यहरु उत्तम रहनेछन तथापी कार्यपुरा नहुन्जेल गोप्य राख्नुउत्तम रहनेछ । बिहिबार पश्चात भने मनोरञ्जनका श्रोतसाधनको खरीदमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा क्षणिक परीर्वतन तथा ढिलाईको सामना गर्नुपर्नेछ । तपाइको कार्यमा हरेक कदममा त्रुटिखोज्नेहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेकोछ । सामान्य यात्राको योग समेत रहनेछ ।
मकर राशि – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि : कार्यक्षेत्रमा गरीएको लापरवाहिले सामान्य अपजस दिलाउन सक्नेछ । मालसामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । यात्रामा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान्यजनहरुको साथसहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । परोपकारिताका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । सामान्य अप्रिय खबरले मन बिचल्लीत रहनेछ ।
बिहिबार देखिभने आम्दानिका श्रोतहरु सबल रहनेछन । बिद्यार्थी बर्गका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । आफुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय अन्य ब्यत्तिहरुलाई प्राप्त रहनाले कार्य प्रतिको लगन शिलतामा कमि आउनेछ । परीवारका सदस्यहरुको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ ।
कुम्भ राशि – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द : साताको प्रारम्भमा सामान्य तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । गरीरहेको कार्य परीर्वतनको समेत सम्भाबना रहनेछ । मंगलबार पश्चात भने धार्मिक यात्राको योग रहनेछ । मित्रजनहरुको बहकावका कारण सामान्य झमेलामा फस्ने सम्भाबना रहेकोछ । मान्यजनहरुको मार्गदर्शन अबज्ञा नर्गनुनै उत्तम रहनेछ । बिहिबार देखि सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ ।
महत्वपूर्ण कार्यहरु हात लाग्ने साथै सहजतापुर्ण ढगंमा सम्पादन हुनेहुदा मान्यजनहरु बाट समेत मानसम्मान प्राप्त हुनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहनेछ । योसाताको सुरुमा स्वास्थलाई बिशेष ख्याल गर्नुहोला ।
मीन राशि – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि : साताको सुरुमा पारीवारिक सम्लग्नतामा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ उठाउन सकिनेछ । प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । कार्य क्षेत्रमा भने शारिरीक आलस्यताको प्रभाब पर्नेछ । बुधबार र बिहिबार नयाँ लगानिका निम्ती सजग रहनु पर्नेछ साथै आफज्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । यात्रामा सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्नेछ । खानपानमा बिशेषध्यान पूर्याउनु होला ।
बिहिबार पश्चात भने मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । नयाँ योजनका साथ प्रारम्भ गरीएका कार्यमा मान्यजनहरुले समेत साथदिनाले कार्यक्षेत्रमा लगनशिलतामा बृद्धि हुनेछ । योसाता यात्राका क्रममा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ सजग रहनुहोला ।